रवि लामिछाने बिरुद्ध पढ्नै नसकिने खेम भण्डारीका स्टाटस, हेर्नै नसकिने समर्थकका कमेण्ट
काठमाडौं । बला’त्कारपछि ह’त्या गरिएकी निर्मला पन्तको परिवारले न्याय नपाएको वर्ष दिन भन्दा धेरै भएको छ । यस घटनामा पछिल्लो समय सञ्चारकर्मी रवि लामिछाने र अर्का पत्रकार खेम भण्डारीकाबीच चर्काचर्की हुँदै आएको थियो ।
रविले त्यो कुरा त्यसै दिन बिर्सेका हुन वा मतलब नगरेका हुन त्यती महत्व नदिएको जस्तो सुरु देखि नै देखिएको धेरैको बुझाई रहेको छ । रविले भण्डारीलाई आफ्नो कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगमा ल्याएर दुई घण्टा लामो समय बहस गराएका थिए । उनीहरुबीच त्यो भन्दा पहिले देखि पनि केही खटपट थियो ।
अहिले झण्डै १२ दिनजसो हिरासतमा बसेर धरौटीमा छुटेको रविसहित ३ जना युवराज कँडेल र अस्मिता कार्कीबारे चर्चा सुरु भएको छ । आफ्नो पुर्व सहकर्मी शालिकराम पुडासैनी आत्मह’त्या प्रकरणमा दोषी भएको भन्दै उनीहरु हिरासतमा पुगेका थिए । यही निहुँमा भण्डारीले लगातार एकपछि अर्को गर्दै लामिछानेका विरुद्ध स्टाटस लेख्दै आएका छन् ।
उनले यस घटनामा निर्मलालाई जोडेर रविको चरित्रह’त्या गर्नेसम्मका स्टाटस राखेका छन् । उनले आदेश हेर्दा ! अस्मितालाइ युज (प्रयोग) गरेका रहेछन ब्रो हरूले ! भन्दै लेखेका छन् । उनले प्रहरी प्रशासनले आफ्नो साख जोगाउन नसकेको भन्दै आलोचना पनि गरेका छन् । उनले अर्को के भनेका छन् भने, ‘धरौटीमा छुटेको अभियुक्तले फुलमाला ग्रहण गर्नु अदालतको अपहेलना हो ।’ उनका केही स्टाटस तल हेर्नुहोस् जुन उनले रविलाई लक्षित गरेर लेखेका हुन ।
निर्मलाको कु’मारित्व र प्रा’णको सौदाबाजी गर्ने रबि लामिछाने अब देशभित्र बन्दक छन । खोइ त अङ्गुर जिसी & कम्पनीले डुङ्गा पार गराएको
निर्मलाको सतित्व र ह’त्यालाई Cash गर्न चाहने सौदागरहरुको लगातार यही हालत भएको छ । आजका केटाहरु त १० औं हुन् । यसअघि बला’त्कारी–ह’त्याराको पक्षपोषण गर्नेहरुको पनि यस्तै हविगत भएको छ । बाँकी रहेका सौदागरहरुको पनि यही हालत हुनेछ । किन हो किन कलपट्ठे र घटालमा विश्वास जाग्दैछ !
जेलभन्दा ठूलो जेलमा परे रवि । न बोल्न पाइने, न देश छोड्न पाइने । अब त सीधा कुरामा Blackmail गर्न पनि नसकिने । योभन्दा ठूलो सजाय अरु केही होला र ? अन्धभक्तहरु काममा लाग यस्ता अभियुक्तको पक्षमा समय खेर नफाल । तिम्रो रवि अपराधी हुन सक्ने पर्याप्त संकेत दिइसकेको छ अदालतले ।
निर्मला प्रकरणमा रवि बिक्री भएका थिए । त्यसको सजाय उनले जीवनभर भोग्ने भए । दुःखको कुरा । नारायण वाग्ले आफू त चिप्लिए नै, रवि प्रकरणमा कान्तिपुरलाई समेत चिप्ल्याएर गए ।